Debian သည်မူလ Desktop Environment အဖြစ် Gnome သို့ပြန်သွားသလား။ | Linux မှ
ကြည့်ရသည်မှာaကကျူးလွန် ခရစ်ယာန် perrier ကြောင်းအတည်ပြု debian နောက်တစ်ခါသုံးမယ် Gnome como Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ရှာဖွေခဲ့သမျှအတိုင်းဤဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတည်ပြုသည့်မည်သည့်တရားဝင်မှတ်စုကိုမျှမတွေ့ရပါ။
တဖကျတှငျငါလျှင်နားလည်လိမ့်မယ် debian အသုံးပြုသူများကိုထောက်ပံ့ပေးတူသောအလားတူအတွေ့အကြုံကိုပေးခြင်းထံအပ်နှံသောသူတို့၏တစ် ဦး ဖြန့်ဖြူးခဲ့သည် Linux Mint o Ubuntu ကိုသို့သော်ထိုသို့မဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ကို၏ developer များသတိရကြပါစို့ Gnome အသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည် Xfce အများအားဖြင့်ဗားရှင်း ၃.၈ အတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် အဆိုပါ fallback session တစ်ခုဖျက်ပစ်တဲ့အခါမှာ။ အကောင့်သို့ကြောင်းဗိသုကာများ၏နံပါတ်ယူပြီး debian အထောက်အပံ့တွေနဲ့ပconflictိပက္ခဖြစ်နိုင်ပါတယ် LLVMpipeဒီပြောင်းလဲမှုအသစ်ကိုငါနားမလည်ဘူး
အလွန်အစစ်အမှန်ဘဝ၌ရှိသော်လည်း, ငါတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသံသရာထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင် debianငါလာမယ့်တည်ငြိမ်ဆုံးမှာလာလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် (ငါသံသယ) နှင့် Gnome ၃.၆၊ ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာအဲဒီအရာတွေကိုစိတ်ပူဖို့အချိန်ရှိလိမ့်မယ်။ မင်းငါ့ကိုမေးရင်ငါပြောလိမ့်မယ် debian သုံးနိုင်သည် သစ်ကြမ်းပိုး အရင်က GNOME shell ကို como Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် နှင့်အကြောင်းပြချက်သိသာထက်ပိုပါတယ်။
ငါနားမလည်တဲ့နောက်အသေးစိတ်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ သူတို့ဘာလုပ်မလဲ Gnome တပ်ဆင်မယ့်စီဒီထဲကိုရောက်သွားလိမ့်မယ် Debian Wheezy?
ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်ရင်သတင်းကလုံးဝမနှစ်မြို့ပါဘူး Xfce 4.8 default အနေဖြင့် ဝမ်းဗိုက် ၎င်းသည်လုံးဝအကျိုးရှိမည်မဟုတ်သော်လည်းအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်အတွက်အသုံးပြုရန်ပိုမိုအဆင်ပြေမည်ကိုပင်သိသည် Xfce 4.10.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Debian သည်မူလ Desktop Environment အဖြစ် Gnome သို့ပြန်သွားသလား။
အဘယ်သူမျှမ, debian wheezy ဖြန့်ချိထားပြီး, ဒါကြောင့်သူတို့အလွန်ရှားပါးကိစ္စများတွင်မှလွဲ။ ဗားရှင်းပြောင်းလဲမှုများကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Debian wheezy တည်ငြိမ်လာသောအခါ gnome 3.4.x ရပါလိမ့်မည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်သဘောတူသည်မှာဗိသုကာအမြောက်အများကိုထောက်ပံ့သော distro သည်၎င်း၏အဓိက desktop desktop တစ်ခုဖြစ်ပြီး hardware video acceleration လိုအပ်သည်မှာမှားသည်။
Debian gnome တည်ငြိမ်စွာ install လုပ်၍ မရပါက cd မှကွန်ယက်မရှိဘဲ၊ ယခုပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။ xfce 4.10 ကိုလေးစားမှုအနေဖြင့်၎င်းသည် wheezy ထဲမဝင်စေရန်တားဆီးထားခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။
သတိပြုရန်မှာ ၃.၄ ကိုအသုံးပြုသောအခါအကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။ Nautilus သည်လုပ်ဆောင်မှုများစွာကိုမဆုံးရှုံးနိုင်သေးသဖြင့် Gnome Fallback သည်ဂရပ်ဖစ်အရှိန်မပြုသောသူများအတွက်အချိန်အတော်ကြာထိန်းသိမ်းထားသည်။
ငါထိန်းသိမ်းထားဖို့မှန်ကန်သောဗားရှင်း Ultra- စမ်းသပ်ပြီး 3.4 ကြောင်းသဘောတူသည်။
သတင်းမှားများထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် debian သည် netinstall installer နှင့် cd နှစ်ခုလုံးသည်မူလ desktop အဖြစ် gnome ကိုယူဆောင်လာသည့် wheezy beta ၃ ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်သူ၏တူညီသောအကောင့်မှ Stefano Zacchiroli ကိုယ်တိုင် (လက်ရှိ debian စီမံကိန်း၏ခေါင်းဆောင်) သည်ကောလာဟလကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကလက်လှမ်းမီတယ်၊ အခြေခံအင်္ဂလိပ်တွေသိတယ်၊ သူတို့ကသင့်ကို Tweet (သို့) အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပေးနိုင်ပြီးဒီလူတွေမှာအဖြေမရှိပါဘူး။ သို့သော်မဟုတ်ပါကကြက်တူရွေးများနည်းတူအခြားသူများကကြက်တူရွေးများကဲ့သို့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေသည်ဟူသောကောလဟာလများကိုပြန်ပြောရန် ပို၍ လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်
ဒီမှာဘယ်သူမှ Rolo ကောလာဟလကိုအားမကိုးကြဘူး။ ဒီဘလော့ဂ်မှာဘာသာရပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆောင်းပါးအားလုံးမှာမင်းပြောတဲ့အတိုင်း "ကောလာဟလ" ဆိုတာဘယ်ကလာသလဲဆိုတာကိုသင်ပြောချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကိုယ်တိုင်ဖတ်လို့ရတယ် ကောလဟာလ | ကောလာဟလ
Debian Developer တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Joey Hess ဆီကနေရိုးရိုးရှင်းရှင်းအရင်းအမြစ်နှစ်ခုကိုမင်းကိုပြောပြပေးပါ
တစ်ခုကဇူလိုင်လ 8, 2012 တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် http://joeyh.name/blog/entry/debian-cd_work_at_DebCamp/
နှင့်ဇူလိုင်လ 28, 2012 မှအခြား http://anonscm.debian.org/gitweb/?p=tasksel/tasksel.git;a=commit;h=2a962cc65cdba010177f27e8824ba10d9a799a08
အကယ်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးလျှင် (သတင်းကိုစစ်ဆေးပါ) ၎င်းတို့သည်အနည်းငယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
03-Aug-2012 cd1 gnome နှင့်အတူ wheezy ၏ beta 1 ကို netinstall ၌ရှိသကဲ့သို့ http://cdimage.debian.org/cdimage/wheezy_di_beta1/
09-Sep-2012 netinstall ၌ရှိသကဲ့သို့ cd2 gnome နှင့်အတူ wheezy ၏ beta 1 ကို http://cdimage.debian.org/cdimage/wheezy_di_beta2/
၁၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ cd19 gnome နှင့်အတူ wheezy ၏ beta 2012 သည် netinstall ၌ရှိသကဲ့သို့ http://cdimage.debian.org/cdimage/wheezy_di_beta3/
ဤ beta များသည် Joey Hess ၏မှတ်ချက်များအပြီးတွင် xfce သည် debian cd1 ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာငြင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ xfce သည် debian desktop default cd1 မဟုတ်ပါ။
သို့သော်၎င်းသည်မလုံလောက်သကဲ့သို့ Stefano Zacchiroli ကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်သည် http://es.wikipedia.org/wiki/Stefano_Zacchiroli မိမိအ identica အကောင့်မှပြtheနာငြင်းဆိုခဲ့သည် http://identi.ca ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်တွင် xfce သည် debian တွင်ပုံမှန် desktop ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသောအရေးပါသော gnome ဆောင်းပါးကိုရည်ညွှန်းသည်။ http://identi.ca/notice/96386955
« Http://ur1.ca/a22vo သည်ကျွန်ုပ်တို့ default desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီဟုပြောခြင်းကိုရပ်တန့်နိုင်ပါသလား။ #Wheezy ပုံရိပ်တစ်ခုကိုဖမ်းပြီး #kthxbye ကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်ပါ»
ကြည့်ကြရအောင်, ဂျို hess Debian Installation CD ကိုတာဝန်ယူတယ် (မင်းရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုမင်းဘယ်လိုခေါ်သလဲဆိုတာငါမသိဘူး)ထို့ကြောင့်၊ သူသည်ကောလာဟလအဖြစ်မှတ်ချက်ပေးနိုင်သည်ဆိုသည့်မှတ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်မထည့်သွင်းပါ။ Debian GIT Commit ကိုယ်တိုင်ကိုမြင်ပြီးနောက်၎င်းသည်အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အတုဖြစ်သည်၊ ထွက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်ဟုကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်စဉ်းစားရမည်နည်း။ ဤသည်မှာဂျာနယ်လစ်များမဟုတ်ဘဲကွန်ပျူတာ geeks ၏ဖန်တီးမှုဖြင့်ဖန်တီးထားသောဘလော့ဂ်ဖြစ်သည်
ငါ av လတ်ကိုသဘောတူတယ် ၎င်းသည်ကောလာဟလမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်စိတ်ချရသောရင်းမြစ်မှသတင်းဖြစ်သည်။ ဒီသတင်းဟာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုလိုလိုငြင်းစရာမလိုတဲ့သက်သေအထောက်အထားမလိုအပ်ပါဘူး။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်စုနဲ့၎င်းရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုကမ်းလှမ်းထားတယ်၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ရှုပ်ထွေးမှု၏တရားခံမှာ Joy Hess ဖြစ်ပြီးသူသည်သူဖြစ်ခြင်းသည်သူ၏စကားများကိုတိုင်းတာရမည်ဖြစ်သည်။
Joey Hess ၏မှတ်ချက်အရ (ယနေ့လအနည်းငယ်ရှိသေးသည်) debian ထံမှတရားဝင်ကြေငြာခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အဲဒါသံသယဖြစ်စရာမလောက်ဘူးလား။ ငါဆိုလိုတာက ... အရွယ်အစားပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး၊ တရားဝင်ကြေငြာချက်လည်းထူးဆန်းနေတယ်၊ ​​ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။
တစ်လလျှင် Stefano Zacchiroli သည်ကောလာဟလကိုငြင်းပယ်သည် (Stefano Zacchiroli သည်ဤအရာသည်အသင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့်အနည်းငယ်အရေးပါမှုရှိသည်ဟုထင်မြင်သည်။ Stefano သည်သူ၏ရုံး၌တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်နေစဉ် Debian ၏မျက်နှာဖြစ်ခြင်းနှင့် Joey Hess သည်အရေးပါသော developer တစ် ဦး ဖြစ်သည်) နှင့်အလွန်တရာမှထူးကဲသော betas များအပြင် Joey ပြောပြီးနောက် gnome3 ကို cd1 အဖြစ်ထည့်ပါ။
xfce ဟာပုံမှန် cd1 ရှိပြီးသားဆိုတာတကယ့်အတည်ပြုချက်တစ်ခုရတဲ့အခါငါတွေးမိတယ်
“ Debian သည် Gnome ကိုပုံမှန် Desktop Environment အဖြစ်ပြန်လည်ယူထားသည်” ဟုမှတ်စုတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ gnome ဟာ debian ထဲမှာ default desktop ဖြစ်တာကိုဘယ်တော့မှမရပ်ဘူး
Pavloco, ငါဒီဘလော့ဂ်၏အလွတ်သဘောမှလွတ်မြောက်ရန်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်, ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်အတွက်သတင်းဇာတ်လမ်းအနည်းဆုံးနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောသတင်းရင်းမြစ်နှင့်အတူစစ်ဆေးရမည်ဖြစ်သည်, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဂျို၏ပြောနေတာပေမယ့်အခြားသူမည်သူမဆိုအခြားအရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေ (သတင်းထပ်ခါတလဲလဲအခြားဘလော့ဂ်များမဟုတ်ပါ အခြားအရင်းအမြစ်) ။ ပြီးတော့ Joey ပြောတာက ၁၀၀ ရာနှုန်းရှင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါဟာတခြားအရာတွေထက်မှတ်ချက်တစ်ခု (သို့) ဆန္ဒရဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့တူတယ်
စာနယ်ဇင်းသမားများကစစ်ဆေးခြင်းမပြုသည့်အခါ၎င်းတို့တွင်လုံခြုံရေးမရှိပါ။ xej: xfce သည် debian တွင်ပုံမှန် desktop ဖြစ်လိမ့်မည်။
ထို့အပြင်လအနည်းငယ်လွန်ပြီးနောက်သတင်းသည်ကောလာဟလတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်၎င်းသည်ထင်ရသလောက်စိတ်မချရကြောင်းနားလည်ရန်လက္ခဏာများစွာရှိပြီးဖြစ်သည် (သိသာထင်ရှားသည် (အများပြည်သူကြားတွင်ပျံ့နှံ့နေသော RAE Voice အရ) ကောလာဟလတိုင်းတွင်တစ်ခုခုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည် verisimilitude)
အတိတ်ကာလသည်သမိုင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်အမှားတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်အရေးမကြီးပါ - ခ
ငါ XFCE ကိုအရမ်းသဘောကျတယ်။ Debian ကအားစိုက်ထုတ်ပြီး xfce 4.10 ကိုအခြားဖြန့်ချီမှုတွေမှာအရမ်းတည်ငြိမ်အောင်လုပ်သင့်တယ်ထင်တယ်။
MANUEL PEREZ သို့ပြန်သွားပါ
Debian တွင် (၁) xfce desktop ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသူတစ် ဦး တည်းသာရှိသည်။ ကျွန်ုပ် xfce 1 ကိုအသုံးမပြုရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုဘလော့ဂ်တွင်ဖတ်ခဲ့သည်။ http://www.linux-support.com/cms/yves-alexis-perez-debian-xfce-4-10-and-xfce-4-11/
ပူးပေါင်းသူအခြားတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်သူက Ubuntu မှာသူပိုပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ငါထင်တယ်။
ထွက်ပေါ်လာမည့် Gnome သည် ၃.၄ ဖြစ်သည်
ငါ၌ Gnome ကိုဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိသော်လည်း Xfce ကိုသင်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
သူတို့ကြုံတွေ့ရသောအမှားသည် ၄.၁၀ အချိန်တွင်စမ်းသပ်ခြင်းကိုမွမ်းမံခြင်းမဟုတ်ပါ။
ငါတတ်နိုင်သမျှ Net Install ကိုသုံးမည်
ယခုအချိန်တွင်သူတို့ပြောင်းလဲသွားမည်ကိုကျွန်ုပ်သံသယများစွာရှိသည်။ xfce ကိုကြေငြာပြီးဖြစ်သည်။ ပြောင်းလဲခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ
ငါသတင်း၏ veracity သံသယ
xfce သည် ၄.၆ မှ ၄.၁၀ မှနောက်ဆုံးသတင်းများကိုမှန်ကန်စွာမထောက်ခံပါ၊ ဤအကြောင်းနှင့်အခြားအကြောင်းများကြောင့် xfce 4.6 သည် wheezy သို့မသွားခဲ့ပါ။ ဒါဟာအချိန်ကိုက်ကိစ္စမဟုတ်ခဲ့ပေ။
ဒါကြောင့် .. အခုငါအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်သည်မှာ - ရွှေ့ပြောင်းမှုယန္တရားတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်မဖြစ်နိုင်သလား။ ငါအတူတူဖြစ်ပျက်အတူတူဖြစ်ပျက်သတိရပါ KDE, ထက်အများကြီးပို။ packages များရှိသည်သောပတ်ဝန်းကျင် Xfce ဒါကြောင့်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးပြီးဖြေရှင်းလိုက်တယ်။
မင်းကိုယ့်ကိုပြောပါ Gnome၊ KDEသူတို့မှာ package ၅၀ ကျော်ရှိတယ်၊ ငါဘာမှမပြောဘူး။ ဒါပေမယ့် Xfce? အကယ်၍ သင်သည် Goodies များကိုဖယ်ရှားလျှင် 50 pack သို့မရောက်ပါ။ ၎င်းသည် developer များ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့်မဟုတ်ပါ debianဒါပေမဲ့ငါ့အတွက်တော့သူတို့မှာဆင်ခြေတွေမရှိဘူး။
Debian သည်အမှားများကိုပြင်ဆင်ရန်မရည်ရွယ်သောပြင်ဆင်မှုများမရှိပဲ package များကိုသိမ်းဆည်းသည့် distro အနေဖြင့်အမြဲတမ်းထင်ရှားခဲ့သည်။
သင်သူတို့ကိုအကဲဖြတ်ရန်မကြိုးစားသော်လည်းသင်ရှိသည်။ အနည်းဆုံးတော့သူတို့တာ ၀ န်ယူမယ်လို့သူတို့မထင်ပါဘူး။ ထိုအခါငါသူတို့နှင့်အတူသဘောတူသည်။ ဒါ့အပြင်သင်လိုချင်တာကနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းအစုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ distro ကိုသင်သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။
မားကို့စ, ငါကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာအတိအကျသိကြ၏ debianကောင်းပြီ၊ ငါဒီ distro ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးခဲ့ပြီ ငါဆိုလိုတာကငါမဆုံးဖြတ်ချင်ဘူးဆိုတာကရိုးရှင်းတဲ့အချက်ကြောင့်ပဲငါက developer တွေအချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကမပါတာကိုဆင်ခြေပေးတယ်။ Xfce 4.10 တစ် ဦး ရွှေ့ပြောင်း / update ကိုပြproblemနာအဘို့, ကောင်းစွာငါနှင့်အတူဖြစ်ပျက်အခါ, ငါထပ်ခါတလဲလဲ KDE အများကြီးပိုကြီးတဲ့သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်။
ငါအသုံးပြုချင်တဲ့အခါ Xfce 4.10 en debianငါသုံးခဲ့တယ် ငါအဲဒါကိုလက်နဲ့ထည့်လိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါသုံးခဲ့တဲ့အတွက်ငါဒီထက်ပိုပြီးအကဲဖြတ်ရမယ် Xfce 4.10 4.8 settings ကိုအကြောင်းကိုငါမပြproblemနာရှိခဲ့ပါတယ်။
အဓိကအချက်ကတော့ရွှေ့ပြောင်းမှုကိုလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ script ဒါမှမဟုတ် application တစ်ခုခုရှိမယ်ထင်တယ် Xfce 4.6aXfce 4.10စာကြည့်တိုက်အဟောင်းများ၏ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများကိုအသစ်များနှင့်တစ်နည်းနည်းနဲ့သဟဇာတဖြစ်စေသည်။ သို့သော်လည်းငါသည်ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်သလို developer မဟုတ်ပါဘူး။ ငါမှားရင်ငါဆုံးမတယ်။
KDE ၏ဖြစ်ရပ်သည်ခြားနားသည်။ အဘယ်ကြောင့်? squeeze ဟာတည်ငြိမ်လာတဲ့အခါ kde 3.5.x မှာတရားဝင်အထောက်အပံ့မရှိဘူး။ Debian မည်သို့အလုပ်လုပ်မည်နည်း (debian မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သံသယမဝင်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်မှတ်ချက်အတွက်မှီခိုနေရတာကိုအမှတ်အသားပြုနေသည်) debian သည်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းမရှိသောဆော့ဖ်ဝဲလ်များကိုထုပ်ပိုးလေ့မရှိပါ။ တစ်နည်းဆိုရသော်သူတို့သည် KDE လုပ်ခဲ့သောအမှားများကိုဖြေရှင်းခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများ၏ KDE 3.5 installation ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ် KDE ကိုထုပ်ပိုးခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ သူတို့မှာရွေးချယ်စရာအများကြီးမရှိဘူး။
အိုး ငါစိတ်ဆိုးနေသလား တောင်းပန်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏သတ်မှတ်ချက်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်မှားယွင်းနေသည်ဖြစ်စေမည်သည့်အသုံးပြုသူကိုမဆိုဒေါသထွက်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ 😉
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသူ (၁) ယောက်သာရှိသည်။
ငါဖော်ပြခဲ့တဲ့အယူအဆကိုသဘောတူတယ် - ငါ Cinnamon environment (နှင့် Nemo, vs Nautilus ဟောင်း) ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ Wheezy မှာတပ်ဆင်ရန်၊ Xfce နှင့် gnome-shell ကိုရပ်ရန်မည်မျှလွယ်ကူသည် - ထိုသို့ဖြစ်သင့်သည်။
တရားဝင်နေ့စွဲဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံး wheezy စတင်ထွက်ခွာတဲ့နေ့ထက်နည်းရင်ဘယ်အချိန်နည်းလဲ၊ ငါအရမ်းသဘောကျတယ်၊ ငါအရမ်းကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ခေတ်မမီတော့တဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့အတူနေလို့မရဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Wheezy ကို 'တည်ငြိမ်သောဌာနခွဲ' သို့မည်သည့်အချိန်တွင်လွှဲပြောင်းမည်နည်းဟုမေးပါက Debian မှပေးသောအဖြေမှာ 'လုပ်ရန်အချိန်တန်သောအခါ' အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ခေတ်မမီတော့သောဆော့ဝဲလ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကိုမရပ်တည်နိုင်ပါကသင်၏အရာသည် Debian Stable ကိုအသုံးပြုရန်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်စမ်းသပ်မှုဌာနခွဲ (ယခု Wheezy ရှိရာနေရာဖြစ်သည်) သို့မဟုတ်၊ 'versionitis' ၏တိုက်ခိုက်မှုခံရလျှင် Sid branch ( မတည်ငြိမ်သော)။ တဖန်သင်တို့ဤ '' အခုအချိန်မှာ '' ကနေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သဘာဝအားဖြင့်သင်ယူနိုင်သည့်အန္တရာယ်များသည်သင့်အပေါ်တွင်မူတည်သည် (လူ၊ ပုံမှန်အားဖြင့်စမ်းသပ်ခြင်းသည်အတော်လေး 'တည်ငြိမ်' သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ခေတ်နောက်ကျနေပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ချိတ်ဆွဲထားခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင် 'အေးခဲနေသော' ဤအချိန်တွင်မူ၊ လအနည်းငယ်အတွင်းတည်ငြိမ်သော)
ferchometal, debian wheezy အဆင်သင့်သောအခါတည်ငြိမ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အရေးကြီးသော bug များအားဖြေရှင်းပြီးမှသာ (၎င်းတို့သည်ဖြေရှင်းရန်များစွာကျန်ရှိနေသေးသည်) ကိုတည်ငြိမ်သောဌာနခွဲတွင်ထားရန်လုံလောက်သောတည်ငြိမ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ခေတ်မမှီတော့သောဆော့ဖ်ဝဲနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၊ debian squeeze အပေါ် အခြေခံ၍ eveline solusos (မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဗားရှင်း ၁.၃ သည်အသစ်ထည့်သွင်းမှုနှင့်အနုပညာလက်ရာများနှင့်ထွက်ပေါ်လာသည်) ကိုစမ်းကြည့်ပါရန်အကြံပြုသည်။ developer (Ikey Doherty, Linux Mint ex) သည်အရေးကြီးသော packets များစွာကို update လုပ်သည်။ rhythmbox, firefox, thunderbird, nvidia driver, flash, kernel, vlc, devede စသည်) ။ ထို့အပြင်သူသည်ဂနမ် (၂) ကိုဘဝသစ်ရရှိရန်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေသည်။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ Gnome3ကိုမယုံခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်မှာ၎င်းသည်တည်ငြိမ်သော version7တွင်ယူဆောင်လာတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုတွေ့သောအခါ၎င်းသည် openbox ကိုတပ်ဆင်ပြီးအမှန်တရားအတွက်၎င်းကိုမပြောင်းလဲစေကြောင်းကျွန်ုပ်တကယ်ကြိုက်ခဲ့သည်။ နောက်တစ်ခု
libuntu ဘလော့ဂ်သည်အရင်းအမြစ်ကိုကိုးကားခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းကိုဖတ်ရသည် http://libuntu.wordpress.com/2012/11/13/erich-schubert-hay-que-migrar-de-gnome-3-a-xfce-lo-mas-pronto-posible/
မူရင်းရင်းမြစ် (ဤ Erich အကြောင်းသင်ပိုမိုသိလိုပါက):
Debian အတွက်မကောင်းဘူး၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုသူတို့ Gnome နဲ့ FSF ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေစေတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ အဖြစ်မှန်ကတော့ Gnome3ဟာ Desktop တွေကြားမှာအဆိုးရွားဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှမသိချင်ဘူး။
ဘယ်သူ့ကိုမှသတိမပြုမိဘူး အတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်။ သင့်တွင် gnome အတွက်အစားထိုးတစ်ခုအနေဖြင့်ကြီးထွားနေသောစီမံကိန်းများစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင့်တွင်ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံး DE solusos ရှိသည်။ (တရားဝင်အမည်မရှိသေးပါ။ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည် gnome 3.0-3.6 ၏ tools များနှင့် gnome panel ၏လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုဖြစ်သဖြင့် ၂.၃၂ gnome panel ကဲ့သို့ကြည့်ရှု။ ပြုမူသည်။ solusos 2.32, ယခုနှစ်လယ်မတိုင်မီ) အရေးကြီးဆုံးသူတွေကိုဖော်ပြရန်, စည်းလုံးညီညွတ်ရေး, သစ်ကြံပိုးခေါက်, mate, ယုံကြည်သည်။ ပြthinkနာကအသိုင်းအဝိုင်းသည်အပြီးသတ်အစားထိုးမှုကိုရှာမတွေ့နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူအများစုသည် Desktop တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ရွေ့လျားခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့နှင့်သိပ်အဆင်မပြေသောအရာတစ်ခုကိုသာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
Debian (၎င်း၏ခေါင်းဆောင်ပင်) FSF နှင့်၎င်း၏ Gnome, Hurd ကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများနှင့်များစွာဆက်ဆံရေးရှိသည်။ လူသိများသည်မှာ debian6(kernel ၏အခမဲ့မဟုတ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖယ်ရှားခြင်း) နှင့်ယခု debian7တွင်အကြံဥာဏ်များရှိသည်။ FSF စာရင်းကိုထည့်ရန်အခမဲ့မဟုတ်သောသိုမှီးရာနေရာသို့ဝင်ရောက်ရန်ခက်ခဲစေရန် (သို့မဟုတ်) လုပ်ရန်http://lwn.net/Articles/505085/) နှင့်အခမဲ့မဟုတ်သော firmware (https://blog.desdelinux.net/firmware-la-pesadilla-continua/) ။ ဘယ်မှာလဲလို့ငါမသိဘူး
Debian ယောက်ျားတွေ XFCE ကိုပြောင်းချင်တယ်၊ ဒီဟာဒီ desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကောင်းကောင်းရစေတယ်၊ ​​ငါ Xubuntu ကိုသုံးတယ်။ ငါ့မှာအရာအားလုံး (အမြန်၊ ဂန္န ၀ င်စတိုင်ပတ်ဝန်းကျင်၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်လှပမှု) ရှိတာကိုငါ ၀ မ်းသာပါတယ်။ သင်မေးကောင်းမေးလိမ့်မည်။ Debian သည် Distro မိခင်တစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအခြေခံသည့်အခြား distros များသည်၎င်းတို့၏အနာဂတ်မူကွဲများအတွက် XFCE ကိုပိုမိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
ငါ XFCE မှာလိုအပ်တဲ့ရင့်ကျက်မှုရှိတယ်လို့မထင်ပါဘူး။ အဖြစ်မှန်ကဒီဟာတွေဟာချို့တဲ့မှုများစွာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ Gnome 2.3 ကိုမရောက်ရှိနိုင်သေးလို့ပါ။
သင့်ရဲ့ default style က cereal box ထဲကလတ်ဆတ်နေပုံမပေါက်ရင် KDE ဟာ option တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ ထို့အပြင် KDE သည်လူ ဦး ရေသိပ်များလွန်းသည်။ အနည်းဆုံးအနိမ့်ဆုံးအနိမ့်ဆုံးသည်ပိုများပြီး KDE မှသင်ခန်းစာယူစရာမလိုတော့ပေ။ ငါကမကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Desktop ကြီးဖြစ်ချင်လို့အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်ပါတယ်။ အရောင်အမှတ်အသားများ၊ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအမြင်အာရုံစသည့်ရိုးရှင်းသောရှုထောင့်များသည်စာရွက်စာတမ်းများကိုစီစဉ်ရန်လိုအပ်သည်ထက်ပိုများသည်။ သူ့ရှေ့တွင်ခလုတ်များများပြားနေသောလင်းပိုင်မရှိသေးပါ။
KDE သည်ပုံကြီးချဲ့ပြီး XFCE သည်ဆင်းရဲသည်။
ပြtheနာကဂရပ်ဖစ်အရှိန်မြှင့်တင်မှုသာဖြစ်လျှင်၎င်းကိုသာရိုးရှင်းစွာ update လုပ်ပါကဟင်းချို၏တစ်နှစ်တာ၏ကွန်ပျူတာသည်အကန့်အသတ်ရှိသည်ဟုယူဆရသည်။ GNU / Linux သည်အစွမ်းထက်သည်မှန်သော်လည်း၎င်းသည် Celeron နှင့် 700 mhz နှုန်းဖြင့်လည်ပတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ငါအသက် 20 ပြည့်ပြီ အနည်းဆုံး core ကို2နှစ်လုံးကိုမှအဆင့်မြှင့်။ PUPPY နှင့် SLAX တို့ပင်ပိုမိုမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များအတွက်တောင်းဆိုလာကြသည်။ တစ်သက်တာကွန်ပြူတာမွမ်းမံမှု ၃၀ နှစ် ၃၀ ကိုမထောက်ပံ့နိုင်ပါ။
နောက်ဆုံးတွင် Gnome-shell သည်အားနည်းနေသည်၊ သူတို့ကိုသင်ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်သင့်သည်၊ သို့သော် Debian သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအုတ်မြစ်ချခဲ့သောထိုစီမံကိန်းများကိုထောက်ခံသည်မှာကောင်း၏။ ယနေ့သူတို့သည် Cinamong၊ Unity စသည်တို့အကြောင်းပြောဆိုကြသည်။ သူတို့ Gnome အောက်တွင်ပြေးကြသည်။ ထို့ကြောင့် Gnome သည်ရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။
ငါမှာ Thinkpad T410 ရှိတယ်။ Ubuntu Gnome Remix ကငါ့အတွက်အရမ်းကောင်းတယ်။ ငါ ARCH (သို့) FREEBSD ကို install လုပ်တိုင်းညတိုင်းကစားနိူင်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်တည်ငြိမ်။ လက်ရှိတည်ရှိနေသောအရာတစ်ခုကိုနှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် UNAM မှပါမောက္ခတစ် ဦး ဖြစ်သည်
၎င်းသည်အသုံးပြုသူအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ရိုးရိုးလေးပါ Xfce 4.10 Gnome2 ကိုမနာလိုစရာမရှိဘူး၊ GNOME3ဒါဟာ Gtk3 .. သေချာတာပေါ့။ Xfce မှာမရှိတဲ့ Gnome မှာ tools နဲ့ options တွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါထပ်တလဲလဲပြောရရင်ကြည့်ရတာအသုံးပြုသူအပေါ်မူတည်တယ်။
အပေါ် KDE, ငါသာကပြောနိုင်ပါတယ် chameleon ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဖြစ်သကဲ့သို့အလုပ်လုပ်မှလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် Gnome, စည်းလုံးညီညွတ်ရေး, သစ်ကြံပိုး, Xfce... ပြီးတော့ငါကသူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှအဖြစ်အလုပ်လုပ်ရန်အဆင်ပြေအောင်လို့မရဘူးထင်ပါတယ် KDE.
သင်တက်ဖို့လိုသည်မှာလေးနက်မှုဖြစ်သည်။ Debian အနေနှင့်ထိုကဲ့သို့သောချို့ယွင်းချက်များကိုခွင့်မပြုသင့်ပါ။
Debian အသုံးပြုသူကပြောတယ်။ 🙁
Debian ကိုပုံမှန် desktop အဖြစ် KDE … l l
မျှော်လင့်ပါတယ် ယခုအပတ်တွင် Wheezy ကို KDE ဖြင့်ကြိုးစားခဲ့ပြီးလေယာဉ်ပျက်ကျမှုတစ်စုံတစ်ရာခံစားခဲ့ရသည်။
ဒါကိုစစ်ဆေးပါ http://anonscm.debian.org/gitweb/?p=tasksel/tasksel.git;a=summary xfce ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင် (နောက်တဖန်) ဖြစ်သောကြောင့် anti-gnome သို့မဟုတ် xfce-fans များသည်နောက်တဖန်မဆင်းရဲခြင်းခံစားရစေရန်အတွက်ပြီးခဲ့သည့် commitdiff ကိုကြည့်ပါ။
အဲဒီမှာသူတို့ကိုသင်ပေးပြီ !! 😛
ငါအပတ်စဉ်တည်ဆောက်မှုနှင့် beta များကိုလိုက်နာခဲ့ပြီး xfce ကို ဦး စားပေးမထားဖူးပါ။ image list ၏အဆုံးမှာ lxde နှင့်အခြား kde cd တို့နှင့်အတူဆက်လက်ဖြစ်ပွားသည်။ ဒီလတွေဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ဒါဟာ gnome ကိုပြန်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ Debian သည်အများသဘောတူမှုကိုလိုက်နာရန်အမြဲတမ်းကြိုးစားခဲ့သည်။ အခြား distro များကဲ့သို့လူတစ် ဦး ၏ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘဲပုံရိပ်ထိန်းသိမ်းသူများသည် Joey Hess ၏အတွေးအမြင်ကိုမည်သည့်အခါကမျှမသိခဲ့ပုံရသည်။ အမှန်တရားမှာ Gnome3သည် cd နှင့်မကိုက်ညီပါ၊ ပထမ ဦး ဆုံး cd တွင်သင့်တွင်အင်တာနက်မရှိလျှင်ဂရပ်ဖစ်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုတပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းကိုမည်သို့ပြင်ဆင်မည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
Marito ကမင်းမှာပြhadနာတစ်ခုရှိခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ် bug တစ်ခုကြုံခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် graphical environment မရှိတဲ့အတွက် cd1estam ရဲ့ xorg, gdm3 နဲ့ gnome ရဲ့ package package မှာသတိထားမိမှာပါ။
rolo, ငါအင်တာနက်မပါဘဲတပ်ဆင်သောအခါ (အပြည့်အဝ gnome တပ်ဆင်ရန်မဟုတ်သကဲ့သို့) taskel ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ "debian desktop ကိုပတ်ဝန်းကျင်" ပေါ်လာပါဘူးသူတို့ကငါဖြစ်ကြောင်း3beta ကိုအတူက fixed ပါပြီစေခြင်းငှါ, အပတ်စဉ်သူတို့ကြိုးစားခဲ့ ကပတ်သတ်ပြီးစမ်းသပ်သွားတယ်
စိတ်ဝင်စားမှုအလွန်များလာသည်ကိုမြင်လျှင်၊ linux သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုသိသောအခြားဘလော့ဂ်မှသူတစ် ဦး သည် Joey Hess သို့အီးမေးလ်ပို့။ Stefano Zacchiroli က xfce ၏မူလ desktop အဖြစ်ပြasနာကိုမေးမြန်းခြင်းမပြုပါ။
ကောင်းသောစိတ်ကူး .. 😉
Ernesto ကိုသတိထားပါ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းငါ့ကိုမေးခွန်းထုတ်နေတာမျိုးမဟုတ်တာကိုစဉ်းစားပါ။ ဒါကြောင့် Debian high command ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဆုံးဖြတ်ဘူးလားဆိုတာမင်းကြည့်ဖို့မင်းမရေးခင်ငါအကြံပေးလိုက်တယ်။
အသစ်သောအရာတစ်ခုမှာ environment cfce ၏ lxde ၏ installation cd တွင်ကွဲသွားခြင်းဖြစ်သည်။
Uet Ubuntu 32 တွင် ESET NOD11.04 ကို install လုပ်ရန်ပြနာ